टिपरको ठक्करबाट बालिकाको मृत्युपछि विराटनगर तनावग्रस्थ, स्थानीय प्रशासनद्वारा निषेधाज्ञा जारी
विराटनगर । मोरङको सुन्दर हरैंचा नगरपालिका–९ सिसौघारीमा टिप्परको ठक्करबाट बालिकाको मृत्यु भएको छ । सोमवार बिहान विराट चोकबाट विराटनगरतर्फ आउँदै गरेको ना३ख ३३५५ नम्बरको टिप्परले ठक्कर दिँदा सुन्दरहरैचा–९ की ११ वर्षीय बालिका लक्ष्मी ढकालको मृत्यु भएको हो । बालिकाको मृत्यूपछि आक्रोसित स्थानीयले
आफ्नो एनजीओ छनोट नगरेको भन्दै मन्त्रीले सचिवलाई कुटे
काठमाडौं । प्रदेश नं २ का आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवले पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सचिव निद्यानाथ झालाई कुटपिट गरेका छन् । मन्त्री यादवले आइतबार बिहान सचिव विद्यानाथलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर कुटपिट गरेका हुन्। संघीय सरकारले सशर्त अनुदानअन्तर्गतको गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका
२७ पुसलाई राष्ट्रिय एकता मान्न थापाको अनुरोध
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस देशव्यापी रुपमा मनाउन सबैलाई अनुरोध गरेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको योगदानलाई राजनीतिक आस्थासँग जोडेर हेर्न नहुने भन्दै शुक्रबार सबैले राष्ट्रिय एकता दिवस मान्न थापाले सबैमा अनुरोध गरेका
शुक्रबार मेडिसिटीमा निःशुल्क मुटु परामर्श सेवा
काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०१९ को अवसरमा नेपाल मेडीसिटी अस्पतालले हरेक शुक्रबार निःशुल्क मुटु सम्बन्धी परामर्श सेवा दिने भएको छ । बिहान ९ देखि दिउँसो १ बजेसम्म मुटुरोग विशेषज्ञसँग निःशुल्क परामर्शको अवसर प्रदान गर्ने अस्पतालले बताएको छ । मुटु रोगबारे परामर्श लिने सेवाग्राहीलाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालले
काठमाडौं, २३ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले वर्तमान सरकार सञ्चालनमा स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादको लक्षण देखिएको आरोप लगाएका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता बडुले भने,‘यो संविधानले शक्ति पृथकीकरणको
काठमाडौं । वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमितिको प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गरेको छ। समितिले नेपाल वायुसेवा निगमले भित्र्याएका दुई ओटा वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी समेत दुइ पूर्व मन्त्री जीवन
काठमाडौं । कोशी नदीको कटानबाट पीडित परिवारले तीन पुस्तासम्म मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् । कोशी कटान सरोकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले गुनासो पोखेका हुन् । समाजका अध्यक्ष डम्बर प्रसाद चौधरीले नेपाल–भारतबीचमा २०११ साल बैशाख १२ गते भएको सम्झौता अहिलेसम्मपनि कार्यान्वयन
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ऋषभदेव भट्टराईलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । उनले पदीय मर्यादा विपरित काम गरि अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अदालतले ९ महिना कैद र ७९ लाख ८७ हजार २२५ रूपैयाँ बिगो जरिवाना हुने फैसला गरेको हो । बिहीबार न्यायाधीश चण्डीराज
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले गाडी लिलाम विक्रीका लागि जारी गरेको सूचनामा वास्तविकता लुकाउन खोजेको पाइएको छ । कोषले गाडी लिलाम विक्रीका लागि गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेपनि त्यसबारे सेवाग्राहीलाई यथेष्ट सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको छ । ‘कोषले लिलाम गर्न लागेको
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको दुई ओटा वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता भेटिएको समितिका सदस्यले स्पष्ट पारेका छन् । वाइडबडी छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले विमान खरिदमा ठूलो घोटाला भएको भन्दै बहालवाला मन्त्री, सचिव र महाप्रबन्धकलाई तत्काल बर्खास्त गरी जेल हाल्नुपर्ने
काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएकिछिन्।शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजना गरिएको विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राणालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकि हुन्। समारोहमा
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत,अब के हुन्छ कर्मचारी आन्दोलन ?
काठमाडौं । संसदले बहुचर्चित कर्मचारी समासमायोजन अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार संसदकको वैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पेश गरेको अध्यादेश स्वीकृत भएको हो । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल भने विधेयको विपक्षमा उभिए । अध्यादेशप्रति विमती
काठमाडौं ।‘नेपाली टोपीः हाम्रो गौरब, हाम्रो पहिचान’ भन्ने नाराका जागरुक युवा अभियान नेपालले छैठौं नेपाली टोपी दिवस मनाएको छ । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको दिन मंगलबार माइतीघरमण्डलामा भेला भएर युवायुवतीले अघिल्ला बर्षमा झैं दाउरा सरुवाल र टोपी लगाएर ‘टोपी दिवस’ मनाए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्रवीटरबाट
१० हजार घुससहित खरिदार अख्तियारको फन्दामा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत डिट्ठा (खरिदार) बिदुर पोखरेललाई रू. १० हजार घुससहित पक्राउ गरेको छ । अदालतबाट डोर खटिएर बण्डा मुचुल्का बनाउने प्रयोजनका उनले सेवाग्राहीबाट घुस रकमसहित आइतबार सोह्रखुट्टेबाट पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका
वाईडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छैनःकंसाकार
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले वाईडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको दाबी गरेका छन् । खरिद प्रक्रिया प्राविधिक विषय भएकोले शीर्ष नेताहरुले यसबारे नबुझीकन प्रतिक्रिया दिएको उनको भनाइ छ । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महाप्रबन्धक कंसाकारले भने,‘यो
धरहराको टुप्पोबाट वातावरण सुधारिएको काठमाडौं हेर्नेछौःप्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भुकम्पबाट भत्किएको धरहराको पुननिर्माण इतिहास झल्किने र आधुनिकता टल्किने शैलीको हुने बताएका छन् । धरहरा पुननिर्माणको शिलान्यास् गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भुकम्पले भत्काएका धेरै ऐतिहासिक क्षेत्रहरुको पुनिनिर्माण र्भइसकेको दोहोरयाउदै बाँकी रहेको धरहरा पुननिमार्णको
काठमाडौं – राजधानी काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम २ डिग्रीमा झरेको छ। न्यूनतम तापक्रम घटेसँगै उपत्यकासहित देशभर बढी चिसो महसुस गरिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार मंगलबार काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम २.६ र अधिकतम तापक्रम १७.७ डिग्री सेल्सियस रहेको छ। सोमबार काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम
कालीकोटमा आगलागी, ३० घर जले
कालीकोट । कालीकोटको पलाता गाउँपालिका-१ खाडा गाउँमा आइतबार मध्य रातिदेखि भएको आगलागीबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । आगो नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । न्यौपाने बस्तीमा आगलागी हुँदा हालसम्म ३० घर जलिसकेको स्थानीय बासिन्दाले जनाएका छन् । खरको छाना भएका खाडाको न्यौपाने बस्तीमा आगलागी भएको हो । क्षतिको यकिन
२४ लाख अवैध रकमसहित २ भारतीय पक्राउ
पुस ९, विराटनगर । सीमावर्ती भारतीय बजार जोगवनीबाट अवैधरुपमा नेपाल ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले रू. २४ लाख नेपाली रकम सहित दुई भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारत अररिया जिल्ला फारविसगञ्ज–९ का २८ वर्षीय सनोजकुमार साह र ५० वर्षीया सुशीलादेवी गुप्ता साह छन् । जाँचका क्रममा बिआर३८एच
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा प्राविधिक कर्मचारीको पनि आपत्ति
काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन गर्न सरकाले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको प्राविधिक कर्मचारी सञ्जाल नेपालले विरोध गरेको छ । सञ्जालले ८ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यादेश नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश
चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीवार बिहान बसेको परिषद्को बैठकले राणालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । न्याय परिषद्ले यसअघि राणासँगै दीपकराज जोशीको नाम संवैधानिक
समायोजन अध्यादेश विरुद्ध कर्मचारी युनियन
काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कर्मचारीको हितमा नभएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष पोखरेलले भने,‘नेकपाको सरकारसँग दुई तिहाईको
अब हामी विकास निर्माणमा जुट्छौ: मुख्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । ३ नं नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अब प्रदेश सरकारले विकास निर्माणमा तीब्रता दिने बताएका छन् । अहिलेसम्म प्रदेशको भौतिक संरचना निर्माणमा लागेको र अब १३ ओटै जिल्लाको विकासमा केन्द्रित हुने उनले बताए । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री
समायोजन पक्रिया प्रभावित हुने भन्दै सरकारी कर्मचारीको सरुवामा रोक
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी समायोजन नगरेसम्म सरकारी कर्मचारीको सरुवा रोक्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीयत तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै तहका कर्मचारीको सरुवामा रोक लगाएको हो । मन्त्रालयले कर्मचारीको
सरकारलाई कर्मचारीको असहयोग छैनःप्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीले सरकारलाई कुनै असहयोग नगरेको बताएका छन् । ‘संघीयताका मामलामा राजनीतिज्ञ जस्तै कर्मचारीहरू पनि नयाँ भएकाले केही अलमल भएको मात्र हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । आइतबारदेखि सुरु अन्तरप्रदेश परिषद् समापन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘सरकारलाई
मङ्सिर २४, काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाको अनुसन्धान साँघुरिँदै गएको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएका छन् । राष्ट्रियसभा, दीगो विकास तथा सुशासन समितिको सोमवारको बैठकमा उनले अनुसन्धानलाई साँघुरो बनाउँदै लगिएको तर निष्कर्ष कहिले आउने
भ्रष्टाचारविरुद्धको सङ्कल्पलाई सूक्ष्म रुपमा हेरिदिनुस्ः प्रम ओली
मङ्सिर २३, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नगर्ने आफ्नो सङ्कल्पलाई सूक्ष्मरुपमा हेर्न मिल्ने चस्मा (म्याग्निफाइड ग्लास) लगाएर हेरिदिन नागरिक समाजलाई आग्रह गरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐक्यवद्ध नागरिक समाजका तर्फबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता व्यवहारमा कार्यान्वयनका
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरबको सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले पाण्डेविरूद्ध २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ मागदाबी गरेको छ । आयोगले शुक्रबार
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले अब कोही पनि जग्गाविहीन नहुने बताएकी छिन् । सरकारले जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्न लागेको भन्दै त्यसले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका उपाए खोज्ने बताइन् । भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, जोखिमयुक्त
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकार ‘गफाडी’ भएको आरोप लगाएका छन् । उनले ‘सरकार धेरै कुरा गर्ने काम कम गर्ने बाटोमा अगाडि बढेको छ, काम गर्न नसकेर सरकारले बुद्धिजीवीलाई समेत धम्काउने काम गरेको छ ।’ कांग्रेस काठमाडौं क्षेत्र नं ८ का क्षेत्रीय सभापति एवं लोकतान्त्रिक नेवा खलः